Koety: Mpiserasera telo nogadraina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Marsa 2019 4:25 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Oktobra 2011)
Sary famantarana an'i Mubarak Al-Bathali (ankavia) sy Nasser Abul manao t-shirt manga (ankavanana) ao amin'ny Twitter.
Tsy manana tantara momba ny fisamborana olom-pirenena noho ny fanehoany ny heviny antserasera i Koety; nihatra tamin'i Bashar Al-Sayegh @balsayegh), mpanao gazety Koesiana izay notànan'ny polisy misahana ny fiarovam-panjakana efa-taona lasa ny tranga fisamborana voalohany tamin'ny aterineto, noho ny lahatsorany tao anaty seha-pifanakalozam-baovao tantaniny antsoina hoe AlOmmah.org. Navotsotra i Al-Sayegh efatra andro taorian'ny nisamborana azy noho ny tontolo politika feno disadisa niainan'i Koety tamin'izany andro vitsy izany, disadisa izay nisy teo amin'ireo vondrona ara-politika samihafa sy ny governemanta. Nitranga tamin'ity taona ity ny tranga hafa fisamborana mpiserasera rehefa avy nanatri-maso ny famotorana ilay mpisera Twitter malaza ao an-toerana antsoina hoe Mishari Buyabis (@mbuyabis) izay nataon'ny polisy misahana ny fiarovam-panjakana famotorana nandritra ny ora maro, ka niteraka resabe teo amin'ny tontolo politika sy tamin'ny media. Telo ireo tranga fisamborana ary samy nitranga telo volana lasa izy ireo, ka miteraka “tahotraamin'izay mety hiafaranao ny fanehoanao hevitra antserasera.
Nasser Abul (@NasserAbuL) no voalohany nosamborina noho ireo siokany. Feno sioka manevateva ny sekta Sonita ny twitter-ny ary koa ahitana fitsikerana goavana ny fitondrana Saodiana sy Bahrainita noho ny fanoheran'izy ireo ny fihetsiketsehana Bahrainita. Mpikambana ao amin'ny Parlemanta Salafi, Walid Al-Tabtabai (@Altabtabie) no voalohany namoaka ireo pikantsary misy ny siokan'i Abul ary nitaky ny fisamborana azy, izay nahatonga ity parlemantera mampiadi-hevitra ity indray ho voatsikeran'ny fiarahamonina Shiita ao anatiny sy ivelan'i Koety. Nandany telo volana i Abul nivezivezy teo amin'ny Polisin'ny Fiarovam-panjakana sy ny Fonja Foibe, miandry ny fitsarana azy. Ny roa tamin'ireo fiampangana azy dia “fanevatevana ny sekta ara-pivavahana sy fanevatevana ireo fitondrana mpifanolo-bodirindrina”, Bahrain sy Arabia Saodita. Ny 27 septembra, nahita ny fitsarana Koetiana fa meloka i Abul noho ny fanevatevana ny sekta ara-pivavahana ary nanameloka azy higadra telo volana an-tranomaizina, izay sazy efa vitany, ary navotsotra izy. Tsara ny manamarika fa nolavin'i Abul ny filazana fa izy no nanoratra ireo sioka nahatonga ny olana, nilaza izy fa nisy ni-piraty ny kaontiny ka rehefa nanontaniana momba ny sary famantarana azy misy ny sainam-pirenena Bahrainita amin'ny twitter, dia nilaza izy fa ao anaty hetsi-panoherana Koesiana izy ho fanohanana ny fikomiana Bahrainita.
Nitranga tamin'ny olona tena mahabe adihevitra antsoina hoe Mubarak Al-Bathali (@mubaark) ny tranga fisamborana mpisera twitter hafa, nifandray tamin'ny Al-Qaeda izy teo aloha ary mamatsy vola sy manakarama olona ho azy ireo tamin'ny alalan'ny lahateniny sy fitsidihany ireo Moskea samihafa, taona maro lasa izay . Nanambara ampahibemaso ny fanohanany an'ny Al-Qaeda i Al-Bathali saingy nanokana ny tenany ho mpanohitra hiringiringiny ny Shiita amin'ny feo manevateva tamin'ny alàlan'ny twitter izy tamin'ity taona ity. Malaza ao an-toerana amin'ny fitsidihany matetika ny ¨Polisin'ny Fiarova-panjakana i Al-Bathali, ary tamin'ity taona ity dia maro ireo Shiita nitory azy noho ireo siokany. Na izany aza, nosamborina ihany i Al-Bathali ary niaiky ny zavatra nosoratany izy, nilaza fa mijoro tanteraka amin'ny zavatra inoany, ka nogadraina telo taona an-tranomaizina izy noho ny fandrahonana ny firaisam-pirenena sy ny fanevatevana sekta ara-pivavahana, ary efa nahena enim-bolana ny sazy.
Ny tranga fahatelo no tena hafahafa indrindra, satria tsy mety milaza izany amin'ny antsipirihany ny fampahalalam-baovao mahazatra Koesiana. Raharaha momba ilay lehilahy antsoina hoe Lawrence Al-Rishidi izay nosamborina noho ny faniratsirany ny Koesiana Amir (ny mpitondra) tamin'ny lahatsary Youtube izany, izay efa nanjavona. Ny Amir, araka ny lalàmpanorenana, dia ny olo-malaza tokana tsy azo tevatevaina na tsikeraina, ary voalaza fa nangataka azy i Al-Rishidi mba hiala, nilaza fa ho tonga ao Koety ny Lohataona Arabo. Imbetsaka ireo fikambanana mpiaro ny zon'olombelona no namoaka tatitra mitaky ny famotsorana an'i Lawrence sy ireo tranga roa hafa saingy tsy nisy valiny avy amin'ny manampahefana Koesiana. Milaza ny tatitra farany ao an-toerana fa niezaka nandà ho tsy nanao ilay lahatsary i Lawrence. Maro ireo fikambanana sy mpikatroka miezaka miantso azy na ny mpisolovavany saingy tsy nisy nahomby.
07 Oktobra 2020Fahasalamàna